SocialReacher: Chii chinonzi Social Media Employee Advocacy? | Martech Zone
SocialReacher: Chii chinonzi Social Media Employee Advocacy?
Mugovera, December 17, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Pamusangano wezvemukati, ndakateerera shamwari yangu Maka Schaefer taura nezvekambani yaive nevashandi vanopfuura chiuru chimwe chete asi mashoma chete masocial share apo iyo brand yakagadzirisa vezvenhau. Rudzii rwemeseji iyo inotumira kune vatengi? akabvunza Maka. Mubvunzo wakakura uye mhinduro yaive nyore. Kana vashandi - zvine mutsindo ivo vatsigiri vechiratidzo - vanga vasingagovane zvemagariro, zviri pachena kuti chaive chisiri chinhu chakakodzera kugovana zvachose.
Takashanda neimwe kambani yeruzhinji ine vashandi vanonyanya kuve vashandi vevashandi. Aya aive asiri pasi pemutsara CSRs, vakashanda nevatengi vese kubvisa mhirizhonga pakati pemutengi nevechitatu mapato, kana kutsvaga vatengi mhinduro huru. Zuva rega rega ivo vaienda kunoshanda nekuwana zvinoshamisa mhedzisiro. Dambudziko rimwe chete… hapana aiziva nezvazvo. Chikwata chemukati hachina kugovana idzi nyaya. Iwo makwikwi ekusimudzira haana kusimudzira idzi nyaya. Vashandi vanga vasingagovane idzi nyaya.
Zvakaipisisa pane zvese, vanotarisira vatengi haana vakanzwa nyaya.
Ndakakurudzira kambani kuendesa mushandi wekumiririra zano uko nyaya dzinogona kuenderedzwa zviri nyore kuchikwata chemukati, zvikwata zvekusimudzira zvinogona kushanda nehukama neruzhinji uye nemikana yakabhadharwa yekusimudzira zvirimo, uye - kupfuura zvese - vashandi vanobva vadzokorora basa rinoshamisa ravaiita.
Nehurombo, kambani yakaramba ichingoshandisa mari yakawanda kushambadziro itsva dzeterevhizheni uye kushambadzira kwakawanda. Ugh.
Chii chinonzi Social Media Employee Advocacy?
Zvemagariro midhiya mushandi ekumiririra maturusi zvinogonesa vashandi vekambani yako uye vanobatsirana navo kuve vamiriri vezvemagariro echiratidzo chako. Kana vashandi vakasimudzira uye vachiratidzira zvemukati, zviitiko, nhau, uye zvigadziriso kuburikidza nevezvenhau, zano racho rinosimudzira kuvapo kwenhau yekambani yekambani, inowedzera kusvika kwechiratidzo chako, uye inovaka kutendeseka nekubata timu yako kugovana nekusimudzira zvemukati zvemakambani.
Yakangotangwa, YemagariroReacher chikuva chakavakirwa vashandi nevashandi kuti vaone uye vagovane nyaya dzezvinhu zvako. Zvakanakisisa pane zvese, iwe unogona kuteedzera mhedzisiro uye kunyange kukurudzira kugovana. Sekureva kwaAltimeter, 21% yevatengi vanofarira zvemukati zvakaburitswa nevashandi, vachikunda dzimwe nzira
Hapana chimwe chinhu chakavimbika kupfuura kuve nevashandi vako vanoziva iyo kambani kubva mukati nekuzvidira vanogovana zvirimo uye kuratidza kudada kwavo pakuva vesangano rako. Makambani mazuva ano anokwanisa kuwana hupfumi hwakawanda, asi vashandi inyowani yekushambadzira. Chinangwa chedu neSocialReacher ndechekusimudzira kufambiswa kwemidhiya yemakambani nekubatsira vashandi kuti vanzwe kuve nechekuita nekusimudzira uye kukura kwechiratidzo. Ismael El-Qudsi, CEO weInternet República
Zvimiro uye kugona kweSocialReacher
Nyore Customization - akasarudzwa mushandirapamwe maneja anosarudza mhando yezvinhu zvichagovaniswa, kana mushandirapamwe uchatanga, chikamu chevashandi chinofanirwa kutarisirwa, uye ndedzipi nhepfenyuro dzezvemagariro dzichashandiswa.
Zvemukati Pre-Kubvumidzwa - chikuva chinotendera kuti mbiru dzive-dzakatenderwa dzisati dzaburitswa kuti dzirambe dzichienderana pamwe nehurongwa hwekushambadzira hwese.
Kukurudzira Dashibhodhi - makambani anogona kumisikidza mibairo kukurudzira mushandi kugoverana mumishandirapamwe.
Chiitiko cheBilingual - chikuva chinowanikwa muChirungu neSpanish kuti igovaniswe zvakawandisa zvemukati pamisika inotarisirwa.
Yechokwadi-Nguva Ongororo - makambani anokwanisa kuwana zvakadzama kubatanidzwa analytics, kusanganisira retweets, kuda, kudzvanya, makomenti uye maonero ezvemukati pamushandisi uye mushandirapamwe.
SocialReacher Inoshanda Sei?
The YemagariroReacher chikuva chiri nyore kugadzirisa nekuchengetedza. Inoteera yakapusa nhanho-nhanho maitiro ekugadzirisa maneja vashandi vako, kudzora zvemukati kuti ugovane, ugovane, kuyera mhinduro, uye kutyaira kumwe kushandiswa kuburikidza nekumisikidza.
Koka vashandi nevashandi
Gadzira uye curate zvemukati
Goverana zvako zvemukati
Chikuva ichi chinofambisa mishandirapamwe paFacebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn uye kunyangwe pamablogi evashandi. Heino skrini yeSocialReacher dashibhodhi:
Iyo chikuva chakagadziriswa uye chakaburitswa na Internet República, dhijitari yekushambadzira agency iyo inonyanya kugadzirisa mukuvandudza uye kutendeuka online pamhepo kushambadzira mhinduro dzinosanganisa SEO, zvemagariro midhiya uye blogging kugona. Yakagadzwa muMadrid, Spain mu2011 nechikwata chevaimbove HAVAS neMicrosoft manejimendi, Internet República yakawedzera pasirese nemahofisi muUnited States neLatin America. Makambani akadai seBMW, Volkswagen, Renault, Bacardi, uye Yahoo vanovimba neInternet República nemamishinari avo ekushambadzira edigital.
Tags: kukurudzirakukurudzira kwevashandimushandirapamweInternet Repúblicasocial media kukurudzirasocial media mushandisocial media mushandi kukurudzirawemusicchii chinonzi kukurudzira kwevashandichii chinonzi social media advocacy